ikhaya KUBAPHATHI Iindaba zeJoachim eziphantsi koBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Ngamana 8, 2018
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo loMphathi weNkundla yeMbali yeNdebe yeNdebe eyaziwayo ngegama; "'Jogi". Ibali lethu le-Joachim Low Childhood kunye ne-Untold Biography Facts kuletha i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kumntwana wakhe kuze kube ngumhla. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch engaziwayo malunga naye.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga neenyaniso zokuba wayekhokela iqela laseJamani ukuphumelela iNqabileyo yeHlabathi yeFIFA yeFIFA eBrazil. Nangona kunjalo, bambalwa isandla abasayaziyo uYoachim Low's Bio enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
Iindaba zeJoachim eziphantsi koBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
UJoachim Löw wazalwa kwi Usuku lwe-3rd kaFebruwari 1960, eSchönau im Schwarzwald, eJamani. Wazalelwa kunina, u-Hildegard Löw kunye noyise owayengamazi osekupheleni owafa esemfana.
UJoachim Löw wakhulela nabazalwana bakhe abathathu, kunye noPeter, uMarkus noChristopher Low. Wayeyena mdala phakathi kweqela leqela eliqela, bonke abafana. Amakhwenkwe adlala umdlalo webhola phantse ukususela apho bahamba khona kwihlabathi eliseScönau, idolophu apho ukungabi nantoni kuphelela xa kukho ibhola kwiinyawo.
Ibali lika-Joachim Low lobuntwaba lunomdla, ukuba aluqhelekanga - Kuthetha ngebali lekinkwenkwe elalilahlekelwe nguyise esemncinci, umntu owayenenkxalabo kunye nokuvavanya ubomi bomntwana kunye nomsebenzi KODWA Ekugqibeleni waba netsikelelo ngekhono lokulawula elingaqhelekanga.
Emva koko, iSkönau iSikole sakhe samnika ithuba lokudlala umdlalo webhola ekhatywayo ngexesha lezemidlalo.
Esikolweni, ibhola yaba ngumthi wegolide kwi-Low, indawo apho wathola khona umthunzi kunye nenduduzo kude neengxaki zakhe zokulahlekelwa nguyise. U-Low wathola ukuba uphumelele kwimfundo eprayimari emva koko wathatha umdlalo webhola. Waba ngumdlali webhola webhola lebhola kunye ne-SC Freiburg esuka kwi-1978 ukuya kwi-1980. Ukubonakaliswa kwetalente ekhethekileyo njengomdlali osemtsha wokudlala, kunye nexesha le18 wayethole isivumelwano sakhe sokuqala sokusebenza. Ngezantsi umfanekiso wezinto awayezijonga ngayo ngexesha lakhe lebhola lebhola.
Ngelishwa, umsebenzi we-Joachim Low njengomdlali webhola lebhola uhlala iminyaka emine (1985 kuya kwi-1989). Wayephukile isifuba shin ebudeni be-22 eyadula ithemba lakhe lokwenza phezulu. Okubuhlungu kukuba, oku kuye kwabangela ukuba ayeke ibhola. Ukwazi ukuba akakwazi ukuyenza kwibhola kuthetha ukuba uqalise ubomi kuwo wonke ulawulo olutsha. UJoachim Low wazifundisa ukuba abe yindoda yefilosofi eneengcamango ezinzulu. Waqala umsebenzi wokuqeqesha ngexesha le-23, efunda umdlalo kunye kunye nomhlaba.
Namhlanje, irekhodi le-Low I-70 iwina kwiindawo ze-103 kumenza abe ngumphathi ngepesenti enkulu yokuwina (67.96%) kwimbali yaseJamani. Igama lendlu kunye nomntu owaziwayo ukulawula iqela lakhe laseJamani njengeqela lakhe. Lona ibali lethu labantwana likaJoachim Low. Bonke abanye, njengoko besoloko bethetha, ngoku iimbali.
Iindaba zeJoachim eziphantsi koBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Ngaphambi kwamadoda onke amakhulu, kukho umfazi omkhulu, okanye oko kuthetha. Kwaye phantse kuwo wonke umphathi webhola ophumelelayo, kukho umfazi othandekayo okanye intombi. Ukusukela ngexesha, u-Joachim Low ulawulo lokulawula, ngokukodwa indlela yakhe yokuphila ngaphandle kwendawo yakhe eyakha umfanekiso opheleleyo.
Umntu ophantsi uthe watshata noDaniela Loew, kwaye bobabini baye bahlanganisana ngaphezu kwe-30 iminyaka. Ngelishwa, abanabantwana kwaye aselithengi imbono yokwamkela umntwana.
Ibali likaJoachim noDaniela lithandekayo. Isibini sichazwe ukuba sihlangene kwi-1978 xa yayingu 17 kwaye yayingu 15. Kwakuyixesha elithile ngumdlali webhola lebhola kunye neqela laseJamani iStiburg. Ba Unandipha ubudlelwane obuqinileyo owakhiwe ngobuhlobo iminyaka eyisibhozo ngaphambi kokuba anqume ukubopha iqhina. Ngezantsi isithunzi somntwana omncinci waseJoachim kunye nothando lobomi, uDaniela.
Iindaba zeJoachim eziphantsi koBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
UJoachim Low uvela kwintsapho ehloniphekileyo eJamani. Siyabulela kuJoachim Low ochazwe njengonyana onobubele kwintsapho yakhe. Idolophu yaseSchönau, eJamani iyaziwa ngokuba yindawo apho umqeqeshi ophumeleleyo waseJamani, uJoachim evela khona. Uya kukwazi idolophu yaseSchnnau xa ubona ibhodi yebhodi ebanzi (echazwe ngezantsi) kunye nekiso lomqeqeshi wehlabathi othanda umnyango. Njengoko ungena edorobheni elihle laseSchönau, uya kuzimela ngokukhawuleza intsapho yase-Low kunye nezihlobo ezihlala apho.
Abazalwana kunye nonina bahlala kwindawo yakubo. Iintsapho ubudlelwane ngaphandle kobazali babo bexesha elidlulileyo banamathele ndawonye "Njengomthi nesulfure". Ngezansi umfanekiso weentsapho emkhosini wobuntu obuninikekileyo obanikezwe kumntu ngokwakhe, uJoachim Low.
Iindaba zeJoachim eziphantsi koBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Iinkcukacha zobomi bomntu
UJoachim Low unelungelo elilandelayo kubuntu bakhe.
Amandla: I-Joachim Low ihamba phambili, i-original, iyimimandla kunye neyomntu.
Ubuthathaka: U-Joachim Low uqhuba ngokungenasiphelo kwaye unokugijima kwintetho yeemeko. Ngaphezu koko, unokuba nomsindo xa ephoselwa eludongeni.
Yintoni uJoachim ayithandayo: Ukuzonwabisa kunye nabahlobo, ukunceda abanye, ukulwa nezizathu kunye neengxoxo zengqondo nabadlali bakhe.
Yintoni uJoachim Low ayithandiyo: Akayithandi izithembiso ezityhutyhilekileyo, engenamntu ngaphandle kukaDaniela umfazi wakhe othandekayo, unobungqingili okanye iimeko ezinzima kunye nabantu abangavumelani nefilosofi yeGosa labadlali.
Ngesishwankathelo, uJoachim unobuncwane kwaye unamandla. Ungumcebisi ojulileyo kunye nomntu onengqondo. Bayakwazi ukulawula abadlali ngaphandle kokubandlulula kwaye banokuzivumelanisa kalula kumbane ojikeleze nayiphi na umdlalo athatha iqela lakhe.
Iindaba zeJoachim eziphantsi koBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Imiba yokuqhuba
UJoachim Low unomcimbi omkhulu ngokuqhuba. Wayevaliwe ukuvalelwa ekuhambeni kweenyanga ezintandathu ukuvala amanqaku amaninzi. Uhlala ehlwayelwa ngokushayela ngokukhawuleza. Esi sohlwayiso sinye ngaphezu kwemida yaseJamani. Ngokomzekelo, umqeqeshi waseJamani akazange aqhube eBrazil ngexesha leNdebe Yehlabathi ye-2014 eBrazil. Ngokwiphephandaba laseJamani elithi Die Welt, U-Joachim uye wabanjwa ngokukhawuleza kunye nokusebenzisa ifowuni yakhe yesondo kwivili.
Umphathi jikelele waseJamani kunye nomhlobo we-Low, Oliver Bierhoff ifanekisiwe ngezantsi xa udibanise ukuba uya kuthanda "Thetha nabaxhasi bethu iMercedes-Benz ukubona ukuba banokumnika imoto nge-speed limiter".
Iindaba zeJoachim eziphantsi koBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -TheTututh Behind Hair
Ngesinye isikhathi, kwakukho amahemuhemu eJamani ukuba i-Joachim Low ibe yindoda ebomvu ngokunyanzelekileyo ingumlingo, kodwa ngendlebe nodliwano-ndlebe no-Die Welt, uLowew wambona iindlebe "Inkunkuma". Ukucima ingqondo yamathandabuzo, wada wanikela intatheli ukuba idibanise iinwele zakhe.
Kukho neqela le-facebook elizinikezele kwiimpawu zokumnyama ezinjenge-Joachim Low, ezibizwa ngokuthi "Yimangalisa kangakanani inwele zikaJoachim Loew?" Kuze kube ngumhla, isiThili asizange sichaze indlela ekwazi ngayo ukugcina isityalo sakhe esilungileyo. LifeBogger Unokucinga nje ukuba uyadla okanye udaye rhoqo.
QHUBEKA: Siyabonga ngokufunda ibali lethu leJoachim Low Abantwana kunye neengxelo ezingezizo. Kwi-LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke ingxelo yakho okanye uxhumane nathi!
I-Julian Brandt Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Marc-Andre ter Stegen Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Mario Gomez Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
U-Antonio Rudiger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Matshi 18, 2018
I-Emre Can Childhood Indaba kunye ne-Untold Biography Facts